Semalt - 3 Mazano Okubvisa URL Parameters Kubva Mumashoko EGoogle Analytics
Zvikamu zveGoogle Analytics inzira inobatsira yekuona maitiro ekutengeserana kwemaInternet. Kana kero yako yeGoogle Analytics yakazara nemakumi ezviuru zvemazana akasiyana asiripo, mikana ndeyokuti URL dzakaipa dzinovhiringidza data yako. Ma URL akadaro haataridzi akaenzana, uye mitemo inowananidzwa kune imwe URL zvakare uye zvakare. Somugumisiro, vazhinji vevashanyi vanotungamirirwa zvakare kunamatwa kwenyu, uye iwe unofanira kuwedzerwa nhamba yevashanyi nokubvisa maitiro akaipa e-URL kubva kuGoogle Analytics - ubnt toughswitch manual.
Nokuda kweizvi, unofanira kufungisisa mazano anotevera akataurwa naOlver King, nyanzvi inotungamirira kubva kune Semalt .
1. Usatora Query Parameters:
Tarisa URL yako yemutauro kana ruzivo rwemukati uye usabvisa mhinduro dzemibvunzo. Chokutanga pane zvose, iwe unofanirwa kuziva kuti zvipi zvirongwa zve URL hazvina maturo uye zvinofanira kubviswa kubva mumashoko ako. Nhanho inotevera ndeyekutarisa Maonero eSarudzo Zvakakosha mubhuku reGoogle Analytics uye uwedzere urongwa hwemibvunzo yemararamiro waunoda kuisa. Zvinokwanisika kuti vazvinatse mushure memaminetsi. Nokuda kweizvi, unofanirwa kugadzirisa zvirongwa munzvimbo yeGoogle Analytics uye ugadzire filtara kune dzose dzakashata URL parameters. Kana iwe uchida kuisa imwe nhoroondo yeGoogle Analytics, unogona kunge uchitya kuvhara deta yako nedzimwe nhoroondo yeGoogle Analytics..Kuti urege kudzivisa, unofanirwa kuenda kuChikamu chePamusoro chekodha yako yekare yeGoogle Analytics uye wobva wawedzera ma-parameter URL mune mamwe mafiriji. Kana wangozviwedzera, usakanganwa kuchengetedza kuchinja uye kumirira imwe nguva kuti data idururire muhutano hutsva kana huripo hweGoogle Analytics.
2. Ronga nzvimbo yekutsvaga:
Unofanirwa kusabvisa mhinduro dzemibvunzo yekutsvaga kubva kuGoogle Analytics mushumo kuti uve nechokwadi chekuchengetedzwa kwewebsite. Muchiona Zvirongwa Zvisarudzo, enda kuSite Search Settings uye chengeta paStrip query parameters kunze kwebhodhi URL. Iwe unofanirwa kukura mupfungwa kuti nhoroondo dzeGoogle Analytics hazviiti zvekudzivirirwa kwezvinhu chero zvakabhadhara. Mune mamwe mazwi, haugone kubvisa maparamendi kubva pane dhenda yapfuura. Icho chinoreva kuti data inofambira mberi ichava ne-URL yemasaramita yakabviswa.
3. Gadzirisai peji rekutsvaga uye kutarisa matombo:
Kana webhusaiti yako yepa web server inoshumira nepamusoro pepaimba inoratidzika se index.php file, iwe unofanirwa kusimbisa peji rekutanga pamwe chete nera trailing slashes. IGoogle Analytics inogona kubvisa domain, yakadai serazrazyegg.com, uye inotarisa zvikamu zvakasara zve URL yekuti uverenge nhamba yose yemapeji akasiyana. Semugumisiro, iyo miitiro ye URL yakasimba inogona kuumba mapeji akasiyana-siyana eGoogle Analytics kuti atorekwe.
Google Analytics inonyora ma URL ako akawanda semapeji akasiyana. Nokudaro, iyo mharidzo ichava yakazara nemazana kusvika kune zviuru zvekuona peji imwe chete iyo isipo uye inokundikana kupa chero kukosha kwebhizimisi rako. Zvinokwanisika kuti URL yako zvirongwa zvisingatauri ruzivo rwekuziva. Semuenzaniso, akawanda ema-parameter URL ane makambani emakambani, zvinyorwa, uye nhamba dzekutengesa dzinozivikanwa sechinyatsoonekwa peji nekaunti yako yeGoogle Analytics.